Fiber FLATBED MAKIINADDA goynta laser AMA-F - Shiinaha Shandong Oree Laser
Mashiinka fiber goynta laser Flatbed waa heer bilow ah mashiinka goynta laser ku haboon oo lacag la'aan ah lagu iibsado sare iyo kharashka tababarka. mashiinka oo dhan wuxuu qaadanayaa jidhka bir ah ee kabka ah, nidaamka hayayaashii iyo pinion drive a, si gaar ah loogu talogalay dhammaan noocyada kala duwan ee sheets biraha. Waa sahlan tahay, waayo, dadka isticmaala in ay ku shaqeeyaan oo ay u ilaaliyaan. Isla mar ahaantaana, geedi socodka shirka adag ay hubisaa in howlgalka xasiloon mishiinka usii goynta sare. fiber Mashiinka goynta laser indhaha siinaya dadka isticmaala awooda awood goynta iyo hufnaan leh accessories fasalka top-keeno, kaas oo doorasho wanaagsan dadka isticmaala si loo farsameeyo nooca dhaqaale.
Goobta Working 3000 * 1500mm 4000 * 2000mm 6000 * 2000mm 6000 * 2500mm
Sugnaantu dhigidda celi ± 0.03mm ± 0.03mm ± 0.03mm ± 0.03mm
Previous: Tumeeya Laser Calaamadaynta Machine RH
Next: XAASHIDA TABLE ISWAYDAARSI & tuubo fiber laser MAKIINADDA goynta AMA-ET
iftiin geeyo tuubo laser MAKIINADDA goynta AMA-TL